Date My Pet » Mitemo nhanhatu Kuti Kukubatsira Manage Your Partner Pet
kubudikidza Kayla Pierce
Mitemo nhanhatu Kuti Kukubatsira Manage Your Partner Pet
Last updated: Chivabvu. 27 2020 | 2 Maminitsi verenga
Kana uri kuenda kudanana muridzi chipfuwo, uchazova kudanana ari mhuka muridzi wacho dzinovaraidza. Angava wavo usimbe gumi nenhatu egore Golden retriever kana avo ruzha cockatiel, kiyi mwoyo yavo iri kuburikidza mhuka yavo.
Sezvo iwe aizoremekedza yako itsva naye uye miganhu ukama hwako hutsva, saka unofanira kuremekedza dzavo dzinovavaraidza uye sei mumwe wako anovakwidza.
Kana chete yakawanikwa mumba kudanana nemunhu ane inovaraidza, kuzoneta nokuputsa mitemo nyore izvi.
Havaedzi mushandirapamwe mubereki. Kana mumwe wako asingadi yeukai kuti kwaari Chihuahua barks pane mimvuri, ipapo hatifaniriwo here. Kunyange kana uri nyika-kirasi anodzidzisa mhuka, hwechipfuwo hakusi kwenyu uye harungazovipo kusvikira uine kuti hwakadzama zvikuru uye vakafunga panze (ovimba) nhaurirano.
Havaedzi kutora nzvimbo yayo. A ukama hwomunhu hwechipfuwo chinhu chakanaka. Ndicho zvakare kusimba chaizvo, inokosha uye zvakaoma ndakawana. Kana zuva rako Matura mangwanani varo Monday famba refu naye pup, kumbira kuti aitewo nevamwe kofi, kuti tisangosiya zvachose. Kana usiku paimba yavo kokutanga chete kuwana kuti avo oversized katsi kanorara pamubhedha, kushanda vakakomba katsi. Fair haasaruri uye zvakanga pakuti mubhedha refu usati.
DON "T pavanoseka vavo. Achifambidzana katsi mukadzi? Ko mudiwa wako kuratidza mifananidzo gerbil wake wose waanenge? Ko mudiwa wako kupfeka yake Chihuahua mangwanani ose, kunyange zvazvo uri mukomana? Iyi haisi nzvimbo yenyu kutonga. Kazhinji, une dzimwe tsika wako chipfuwo sezvisingaitiki kwavari, saka kuchengeta kusekwa kushoma.
REGAI kubatanidza mhuka. Mhuka dziri chaizvo chaizvo kuti vanhu unhu. Kana unogona kupinda Nyasha dzemutendi zvakanaka mhuka wacho, mikana muridzi wavo vachatevera suit. Tsvaga zvinhu zvaungaita pamwe chete vari dzinovaraidza ushamwari.
REGAI anosanganisira dzako bhabhadzira. For anosarudza zhinji, mhuka dzakaita vana. Uye kana uchida kuona kana ramangwana rako rakajeka pamwe chete, regai zvenyu dzinovaraidza kusangana uye tione kuti anosangana. Kana vasingaporofiti kufanana mumwe pakutanga, akaisa achiedza kuwana ikoko. Kwete chete Zvichava nyore, richava nzira huru kuuya kwamuri vaviri pedyo muukama hwako.
REGAI kuita mukuru wevaFiripi. saka, zvichida haudi kuva hwechipfuwo Tag pamwe mumwe musi, asi Kuedza ndiko kunokosha. All mumwe wako anofanira kuziva ndechokuti kana ukawira murudo navo rimwe zuva, uchaita kuda dzinovaraidza yavo, wo. Vanopemberera zuva rokuberekwa kwavo, kana kutenga kwavari tsauri. Tora kuti paki kwavari woga. Zvishoma Zvinhu nguva dzose kuverenga, asi kana totaura dzinovaraidza, dzimwe nguva huru zvinhu kushanda kunyange nani.
Dating – Uri vangavhiringidza Yourself?
Chii Women Funga About Munguva Sex